N'ogbe GQ-SN Flash Seeting Admixture - Liquid (Alkali-free) ụlọ ọrụ na ndị nrụpụta | Gaoqiang
GQ-SN Flash Seeting Admixture - Liquid (Alkali-enweghị)
GQ-SN bụ ụdị mmiri mmiri ala ome osooso. Akụkụ bụ isi nke GQ-SN bụ sodium aluminate. A na-eji ngwakọta ahụ eme ihe maka ihe a na-agba agba; o nwere ike mee ngwangwa hardening usoro nke ihe rụọ ọrụ nke ọma, na nwere uru nke ala ájá njupụta, ala resilience, elu ogologo oge stre
GQ-SN bụ ụdị mmiri mmiri ala ome osooso. Akụkụ bụ isi nke GQ-SN bụ sodium aluminate. A na-eji ngwakọta ahụ eme ihe maka ihe a na-agba agba; o nwere ike mee ngwangwa hardening usoro nke ihe rụọ ọrụ nke ọma, na nwere uru nke ala ájá njupụta, ala resilience, elu ogologo oge ike, wdg
1 Accelerating na harden nke ihe rụọ ọrụ nke ọma. O nwere ike ime ka oge izizi izizi erughị 5 min na oge ikpeazu na-erughi 10 min.
2 Na-arụsi ọrụ ike na-ebuli ike n'oge, ọ nweghịkwa mmetụta na ike ogologo oge.
3 Ndaghari ohuru iji ojiji nke ihe nke ihe.
4 obere irighiri, nwere ike imeziwanye ọwa mmiri.
5 Were uche nke polycarboxylate mmiri-reducer ka akụrụngwa, oriri mmiri na usoro onunu ogwu.
Ubi nke Ngwa
Cementitious ewu ihe, karịsịa akwadoro maka mmalite-ike cementitious ewu, dị ka ịgba ụfụfụ, ihe a na-agba agba, ihe nkedo, ihe mkpuchi oghere, wdg.
Nka na ụzụ Data / Ahụkarị Njirimara
Ọdịnaya siri ike
Njupụta / (g / cm3), 22 ℃
Chloride ọdịnaya / (%)
Ọdịnaya Alkali / (%)
*Typicaldị njirimara ndị a dị n'elu abụghị ihe ndị akọwapụtara nke ngwaahịa a.
Ọnụọgụ ọgwụ: Ngwadogwu a tụrụ aro bụ 6.0-8.0% site na ịdị arọ nke ihe ejikọtara ya. Practicaldị onunu ogwu kwesiri ibu dabere na ciment ụdị, gburugburu ebe obibi okpomọkụ, mmiri ciment ruru, ike ọkwa, ewu technology na oru ngo choro. Akwadoro ka ị nwalee arụmọrụ ahụ site na iji akụrụngwa na saịtị.
Ojiji: Na-etinye mixgwakọta cementitious ihe n'ime injector, ome osooso na kwukwara na nozulu. Mmiri simenti ruru na-atụ aro 0.33-0.40 maka ngwa agha, 0.38-0.44 n'ihi na ihe, na huu spraying ngwa agha ma ọ bụ ihe anaghi agba, agba di ocha.
Ngwugwu na Nchekwa
Ngwugwu: 200kg / drum, 1000kg / IBC ma ọ bụ rịọ arịrịọ.
Nchekwa: Echekwara na ụlọ nkwakọba ihe ikuku nke 2-35 ℃ na ngwugwu na-emebibeghị, na-enweghị ikpuchi, ndụ adịghị adị 90 ụbọchị. Ruru eru tupu ojiji ma ọ bụrụ na ọ gafere ndụ ndụ.
Ihe ọmụma zuru ezu gbasara nchekwa, biko lelee Mpempe akwụkwọ Data Nchedo Ihe.
Mpempe akwụkwọ a bụ naanị maka nrụtụaka mana ọ naghị ekwu na ya zuru ezu ma ọ nweghị ọrụ ọ bụla. Biko gaa n'ihu iji nwalee ya itinye n'ọrụ.
Nke gara aga: GQ-210 Onye Ike Ike Oge
Osote: Cellulose Ether HPMC maka plasta / Concrete / Grout dị ka Onye Na-echekwa Mmiri
GQ-210 Onye Ike Ike Oge
GQ-KG (L) / 01/02 USB Grouting Ukwu
Cellulose Ether HPMC maka plasta / Concrete / GR ...